Maka: ubujamo obugqamile | Martech Zone
Maka: ubujamo obugqamile
ICoastal Creative yenza umsebenzi omuhle ukugcina phezulu kwamathrendi wokuqamba ngokukhipha i-infographic enhle unyaka nonyaka. U-2017 ubukeka njengonyaka oqinile wamathrendi wokuklama - ngiyabathanda bonke. Futhi sifake okuningi kwalokhu kumakhasimende ethu ngisho nasendaweni yethu ejensi. Ngonyaka wesithathu zilandelana, sikhiphe uhlobo olusha sha lwamathrendi wethu athandwayo we-infographic wango-2017. Yize kunemigomo yokwakhiwa